Ciidanka Booliska oo Sheegey in la xirey Askartii Dishey Taliyihii Ururka Gorgot - Awdinle Online
Ciidanka Booliska oo Sheegey in la xirey Askartii Dishey Taliyihii Ururka Gorgot
October 19, 2019 (AO) – Warar hada nasoo gaaraya ayaa sheegeya in Taliska Booliska Soomaaliyeed ay shaaciyeen in xabsiga loo taxaabay askar ku sugneyd bar koontarool oo ku taala nawaaxiga Ex Baar Shabeelle, ka dib markii ay ku lug yeesheen fal lagu dilay Sarkaal ka tirsanaa Ciidanka Xoogga dalka.
Taliye ku-xigeenka Booliska Soomaaliyeed S/guuto. Zakiya Xuseen ayaa sheegtay in dhammaan ciidanka joogay barta koontarool la xiray, isla markaana Ciidanka Booliska ay wadaan baaritaanka falkaas.
Sarkaalka lagu dilay is rasaaseynta ka dhacday agagaarka Ex Hotel Naasahablood 2 iyo nawaaxiga Baar Shabeelle ayaa warar kala duwan ay ka soo baxayeen.
Sarkaalkan ayaa ahaa Taliyihii Ururka Gorgor ee ka tirsanaa Ciidanka xoogga dalka qeybta Kumaandooska, waxaana lagu magacaabi jiray Maxaadeey Suleeymaan, isagoo ahaa Taliyihii hoggaaminayay howlgalkii lagu qabtay Awdheegle.
Dhacdadii xalay lagu dilay Taliyihii Ururka Gorgor ee Kumaandooska Xoogga dalka ayaa waxaa aheyd arrin aad loo hadal hayay, taasoo qabsatay baraha bulshada, dad badan ayaa nasiib darro ku tilmaamtay in Taliyaha uu ku dhinto gacantii ciidankii dowladda.
Previous articleKalfadhiga 6aad Kulankiisi 1aad ee Golaha Shacabka oo maanta furmaya
Next articleTabinta Wararka Golaha Shacabka Oo Loo diiday Warbaahinta Madaxabanaan